Ny fikosoham-bary sy ny fikosoham-bary no fomba farany ho an'ny dingana teo aloha amin'ny fitsaboana kristaly fikarakarana vato na fanodinana takelaka hazavana. Iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra amin'ny fikarakarana vato amin'izao fotoana izao, fa tsy toy ny fanadiovana marbra sy savoka an'ny orinasa mpanadio nentim-paharazana. T...
Fampidirana ny fanosorana vato sy fikosoham-bary
Ny fikarohana momba ny mekanika fametahana vato, ny antony lehibe indrindra amin'ny fiantraikany amin'ny famolahana sy ny teknolojia fametahana vato, dia manondro indrindra ny endrik'ilay vato. Taorian'ny fampiasana nandritra ny taona maro sy ny toetr'andro voajanahary, miaraka amin'ny fikarakarana tsy mety ataon'ny olombelona, ​​​​dia mora ny ...
"Diamond Nano-polycrystalline" dia mahatratra ny tanjaka ambony indrindra hatreto
Ekipa mpikaroka iray ahitana mpianatra Ph.D Kento Katairi sy Profesora Associate Masayoshi Ozaki ao amin'ny Graduate School of Engineering, Osaka University, Japon, ary Profesora Toruo Iriya avy ao amin'ny Foibem-pikarohana momba ny Deep Earth Dynamics of Ehime University, sy ny hafa, dia nanazava ny tanjaky ny...
Ny fironana amin'ny fivoaran'ny diamondra tsofa dia maranitra
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina sy ny fandrosoan'ny olombelona, ​​ny vidin'ny asa any amin'ny firenena eoropeanina sy amerikana dia tena avo be, ary ny fireneko dia mihena tsikelikely. Ny fahaiza-manao avo lenta no lasa lohahevitry ny fampandrosoana ny fiarahamonina olombelona. Toy izany koa, ho an'ny diamondra tsofa bl...